Phupha ngesimemo Discover Discover Discover Online ▷ ➡️
Kwixesha elidlulileyo, isimemo sasidla ngokubhalwa, ngeleta okanye ngekhadi. Kodwa inokwenziwa ngumthunywa ngomlomo, ngesiqhelo ukongeza. Kuxhomekeka umsitho, ukubaluleka okukhulu kwaqhotyoshelwa ephepheni nakwifonti okanye kuyilo.
Izimemo zanamhlanje zihlala zithunyelwa nge-imeyile, ngeSMS, ngeenkonzo zemiyalezo, okanye nakwimithombo yeendaba zentlalo, kuba oku kuyakhawuleza kwaye kulula. Nangona kunjalo, kuxhomekeke kumnyhadala, isimilo esikhethekileyo sesimemo ngamanye amaxesha siyalahleka.
Ke ngoko, ukutolikwa kwamaphupha, kunomdla, kwelinye icala, ukuba loluphi uhlobo isimemo esenziwe ephupheni. Kwelinye icala, isizathu sesimemo kufuneka siqwalaselwe ngokusondeleyo. Kuba kwezi zigqibo kunokutsalwa umyalezo wephupha. Ngaba yayisisimemo kwi-cinema, kwimyuziyam, kwithiyetha, kwisidlo okanye kumhla? Mhlawumbi bakumemele kumdlalo we-poker? Nabani na onabantwana unokuphupha ngesimemo somnyhadala wesikolo.
1 Uphawu lwephupha «isimemo» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «isimemo» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «isimemo» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «isimemo» - ukutolikwa ngokubanzi
Ukutolikwa ngokubanzi kwephupha kutolika isimemo ephupheni ikakhulu njengophawu lomntu oleleyo lokuba yonke into inxulumene nomcimbi othile. phuhlisa ngexabiso eliphantsi iba. Ukuba umphuphi ufumana elele ileta yesimemo kumbhiyozo, njengomtshato okanye umhla wokuzalwa, okanye kumnyhadala woluntu ofana nekhonsathi okanye ulwamkelo, kungekudala uza kuthatha inxaxheba kwiholide el mundo yomlindo.
Ukuba umntu umenyiwe ukuba atyelele ephupheni, kufuneka azilungiselele iindaba ezimbi ebomini bokuvuka. Ukuba umntu ophuphayo uphendukela kwisimemo okanye kwinto ayemenyiwe kuyo, kungekudala uya kufumaneka. ngaliswa ngaphambili. Nokuba oku kuya kuba mnandi okanye kungathandeki, unokufunda kwiimeko ezihamba nale meko yamaphupha.
Ukuba umntu oleleyo umema abahlobo okanye abantu abaziyo ephupheni, uhlala ethathelwa ingqalelo kwihlabathi lokwenyani kungekudala. amava angonwabanga unento eza kubangela inkxalabo kunye nemincili. Nabani na othumela amakhadi esimemo abhaliweyo kumaphupha abo anqwenela ukwandisa isangqa sabahlobo.
Ukuba umfazi ephupheni ufumana isimemo kwiqela, mhlawumbi kwi-ski hut, omnye kufuneka aqaphele kwihlabathi elivukayo. Kungenxa yokuba unokulindela izinto ezintle, kodwa ngekhe zenzeke. Ukuchasana kuhlala kunjalo.
Ngokokuphononongwa ngokubanzi kwephupha, isamani yenkundla okanye isamani ephupheni ayinakuba semthethweni. intshutshiso khomba ebomini bokuvuka. Isimemo sesikhumbuzo sisoloko sithetha ukuthatha inxaxheba kumnyhadala omnandi njengophawu lwephupha. Abo bamenyelwe kumsitho wokugqibezela ebuthongweni babo bahlala bejamelana notshintsho.
Uphawu lwephupha «isimemo» - ukutolikwa kwengqondo
Ngokwengqondo, isimemo ephupheni ikakhulu sibonisa imvakalelo yoku u lonwabo. Umphuphi akanako ukuzikhulula kolu lonwabo ngamandla akhe. Ke ngoko, unethemba lokuba omnye umntu uza kuqhakamshelana naye ebomini bokuvuka.
Umfuziselo wephupha "isimemo" unokusetyenziswa njenge isilumkiso uqonde ukuba awusayi kuhlala kude nabanye abantu. Oleleyo kufuneka asebenze, asondele kubantu abamngqongileyo kwaye angabi salinda.
Ukuba umphuphi ufumana isimemo ephupheni lakhe, uzuze imbeko kunye nokuqwalaselwa ngabanye ngokuzibophelela kwakhe. Ukuba umntu oleleyo uyavuma ukuya kwisimemo njengondwendwe, kunokuba njalo Uluvo lokuba ngowakho Ukujolisa kwiqela elithile kwihlabathi lokuvuka. Ukwala isimemo njengomfanekiso wephupha kunokuzisa amava adinisayo.
Uphawu lwephupha «isimemo» - ukutolika kokomoya
Kwinqanaba lokomoya lokuchazwa kwephupha, uphawu "isimemo" lubhekisa kwi Ukulindela ukusuka ekuphupheni ukuba ingaphakathi lakho lokomoya ngoku lilungele umhlaba wangaphandle.